"Sambatra izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany." Romana 4:7
“Indray andro aho dia nanambara tao am-poko hoe : “Indro, manaiky Anao ho Mpamonjiko aho, ry Jesosy”, ka nahatsapa fiadanam-po lehibe tao anatiko. Nivavaka aho mba hamelana ny fahotako, ary navelan’Andriamanitra ny heloko, satria efa nefain’i Jesosy ny saran’ny fahadisoako.
Taorianan’ny niovako fo, na dia nahatsiaro fahasambarana aza aho, dia nandalo fitsapana maro. Ny voalohany dia ny fahatapahan’ny fifandraisana tamin’ny fianakaviako. Tsy ho nahazaka ny handainga tamin’izy ireo aho, ka nanambara taminy fa niova finoana. Tezitra mafy izy ireo ka nilaza tamiko fa tsy te hahita ahy intsony. Nisy fitsapana hafa nanaraka izany, ary niharan’ny tsindry hazo lena aho. Tamin’izany ny Tompo dia nampianatra sy nampahery ahy, satria nanomana vahaolana hatrany Izy, tamin’ny toe-javatra tsirairay. Nampianariny koa aho hanohitra ny fahavalon’ny fanahiko. Io ady anaty io no tena mafy, satria i Satana no nifanandrina tamiko, nefa nahatanteraka asa goavana tato anatiko Jesosy. Tsy andriko mihitsy ny hahatafavoaka ahy amin’io tsindry hazo lena io, ka nangataka tamin’ny Tompo aho mba hampiany sy hampianariny mandrakariva ! Teo Izy, niandry ny fangatahako, satria nitsotra ny tanany mba hanome. Naniry hahafantatra io Jesosy namonjy ahy io aho, naniry hahafantatra ny fomba itiavako Azy tahaka ny itiavany ahy. Nasehony ahy ny maha Izy Azy, ka tokana ihany ny faniriako, dia ny hitovy aminy, satria lavorary amin’ny lafiny rehetra Izy.
Jesosy no Ilay namela ny heloko. Nodioviny ny foko, nositraniny ny ratrako rehetra. Te hidera ny anarany mandrakariva aho, ary te hisaotra Azy. Toy ny namonjeny ahy no hitadiavany koa “ondry very” hafa, mba hampahafantarany azy ireo ny fitiavany.